Mayelana NATHI - Hebei Shaoman International Trade Co., Ltd.
Inkampani yezokuhwebelana i-Hebei Shaoman iyinkampani enolwazi ngokuklama, ukuthuthukisa, ukukhiqiza nokumaketha amathoyizi ocansi. Silandela ngokuqinile izindinganiso ze-ISO & ROHS, futhi silandela umqondo wokukhiqiza we-Eco-friendly non-toxic, isikhumba-friendly, yonke imikhiqizo idlulise isivivinyo se-CE ne-FDA. Sigxila ekuthuthukiseni nasekukhiqizeni imikhiqizo yabantu abadala esezingeni eliphakeme.
Sinomnyango wokucwaninga nentuthuko oqinile, manje inkampani yethu ithuthuka ngokushesha kulokhu okufakwe eChina. Samukela ngobuqotho amakhasimende aphesheya nakwasekhaya ukubambisana nathi ngokuzayo. Samukela ngemfudumalo ama-oda we-OEM ne-ODM. Sibheke phambili ukukunikeza imikhiqizo yethu emihle kakhulu kanye nensizakalo ehamba phambili.
Siphakela ikakhulukazi insiza yokumisa eyodwa kumakhasimende. Sisabalalisa amathoyizi ocansi ahlukahlukene, kufaka phakathi onodoli bezocansi, imilenze yokushaya indlwabu, indlwabu enkulu yezimbongolo, izitokfela, ama-dildos, indebe yokushaya indlwabu, ibhola le-kegel, izidlidlizi, amathoyizi we-Anal, umkhiqizo wochungechunge lwe-SM, unodoli wezocansi onganambitheki ... njll.
Sigxile kunodoli wezocansi ohlakaniphile, unodoli wezocansi we-TPE, unodoli wezocansi weSilicone iminyaka engaphezu kwengu-12. Irobhothi kanye nodoli wezocansi kuhlangene ndawonye, ​​sinikeza unodoli ocansini ohlakaniphile ngomsebenzi wokucwayiza, ukumamatheka, umsindo nokushisa. Idoli locansi lifaka unodoli wobulili besilisa, unodoli wobulili besifazane, unodoli wobulili bomzimba oyingxenye, unodoli wobulili besilisa. Ingasetshenziswa kakhulu njengamamodeli wokukhangisa, umlingani wabantu, umlingani wezocansi.
Ngokuthuthuka komphakathi, abantu abaningi ngokwengeziwe bazizwa benesizungu futhi benengcindezi enkulu kakhulu empilweni nasekusebenzeni. Ngakho-ke imikhiqizo yamathoyizi ocansi ayisebenziseli kuphela ukuthandana kwabantu abathandanayo, kepha futhi ingathuthukisa uthando lwezithandani, ikakhulukazi kulabo abanokukhubazeka ngokocansi, ukunganaki ngokocansi, noma abanenkinga empilweni yocansi yemvelo. Futhi namathoyizi wezocansi anganciphisa ukucindezelwa ngokocansi futhi anciphise imizwa emnyama.
Imikhiqizo yethu isivele ithengiselwe iYurophu (njengeJalimane, i-UK, iFrance, iNetherland, iBelgium, i-Italy, iSpain, i-Austria, iRussia, i-USA, iCanada, iBrazil, i-Australia, iJapane, iKorea, iThailand, njll. ithimba lesevisi yokuthengisa ngemuva, ukuqinisekisa ukuthi uthola ulwazi olubalulekile lokuthenga.